Teboka vavaka hanoherana ny tsy fahombiazan'ny orinasa | TOKO VAVAKA
Home Uncategorized Teboka vavaka hanoherana ny tsy fahombiazan'ny orinasa
Androany dia hiatrika teboka vavaka isika manohitra ny tsy fahombiazan'ny orinasa. Raha efa niaina tsy fahombiazana tsy tapaka tamin'ny asa aman-draharahanao ianao, dia ho anao ity torolàlana vavaka ity. Raha aorian'ny famolavolana paikady tsara rehetra amin'ny fananganana ny empira orinasanao dia nanantona ireo manam-pahaizana momba ny vanim-potoana ianao, kanefa ny orinasanao dia tsy niaina zava-bita hafa, dia mila mitodika amin'Andriamanitra ianao. Mampahatakatra antsika ny soratra masina fa ny hevitra tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra.
Tsy tian'ny fahavalo hahomby isika satria tsy tiany hiaina milamina isika ao amin'i Kristy Jesosy. Aza hadino ny mahalala fa hanakorontana ny ezaka ataonao ny fahavalo, indrindra amin'izany orinasa izany. Mbola manana vaovao tsara ho anao aho anio, Andriamanitra dia efa akaiky hijery ny toe-javatra misy an'io orinasa io, ary vonona hanampy anao amin'ny tsy fahombiazan'ny orinasa Izy. Fa voasoratra ao amin'ny Deoteronomia 8:18 tsarovy Jehovah Andriamanitrao. Izy no manome anao hery hahombiazanao amin'ny fanatanterahana ny fanekena izay nohamafisiny tamin'ny razanao tamin'ny fianianana. Betsaka ny olona manana ny fahefany hanan-karena dia nalain'ny devoly ary izany no antony tsy naharesy lahatra azy ireo tamin'ny orinasany.
Mitondra vaovao mahafaly aminao aho anio, indro, Izaho hanao zava-baovao, ankehitriny dia hitsimoka izy, satria tsy fantatrao izany. Hanao lalana any an-efitra sy ony any an-efitra aho. Hanao zava-baovao Andriamanitra amin'ny raharaham-barotrao, ary hihira hira vaovao ianao. Rehefa manomboka mandalina ity torolàlana momba ny vavaka ity ianao dia mivavaka fa ny herin'Andriamanitra dia hanorotoro ny demonia tsy fahombiazan'ny fahafatesana noho ny asanao. Manomboka izao dia manomboka hiaina fihodinana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Io raharaham-barotra mirodana io dia manamafy orina amin'ny alàlan'ny herin'ny lanitra.
Jesosy Tompo ô, tonga eo anatrehanao anio aho hivavaka momba ny raharahako. Niaina tsy fahombiazana be loatra tamin'ny fametrahana ny orinasako aho. Mampionona ahy ny teninao izay milaza fa Andriamanitra no manome hery hahombiazanao. Mivavaka aho mba homenao ahy ny fahefana hahomby amin'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
Manome didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny anjelin'ny tsy fahombiazana, ilay mpiasan'ny fahasahiranana noho ny asako, dia naringana tamin'ny anaran'i Jesosy. Ry Jesosy Tompo ô, izaho manao didy amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy fa ny trano mimanda rehetra ao amin'ny maizina dia alaina amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny rahona maizina rehetra amin'ny tsy fahombiazana amin'ny asako dia esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra fa na inona na inona apetrako, dia tsy maintsy ho marina ny tanako. Manome didy amin'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy aho fa izay rehetra ametrahako tanana manomboka izao dia hanomboka hiroborobo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny soratra masina dia milaza fa ny hevitra tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra, manapa-kevitra amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa ny hevitra tsara rehetra ilaiko hijoroana lava amin'ny asako dia manomboka manomana izany amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mitady ny fahendrenao masina aho hitety ny orinasako mahazatra, ny fahendrena handrafetana ny orinasako amin'ny faritra mety hahomby; Mivavaka aho mba homenao ahy amin'ny anaran'i Jesosy izany. Hoy ny soratra masina raha misy tsy manam-pahendrena, avelao izy hangataka amin'Andriamanitra manome malalaka tsy misy kilema. Ny fahendrenao tsy misy kilema no tadiaviko; Ny Tompo dia manome ahy izany amin'ny anaran'i Jesosy.
Mivavaka aho mba hialan'ny zavatra rehetra ilaiko ny hampisondrotra ny sambon'ny orinasako amin'ny fahombiazana, mivavaka aho mba hanombohan'Andriamanitra hanome amin'ny anaran'i Jesosy. Miorina amin'ny fampanantenan'ilay teny milaza aho fa ny Andriamanitro dia hanome ny filako rehetra araka ny haren'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ray Tompo ô, mivavaka aho mba homenao ny zavatra ilaiko rehetra mba hahombiazako amin'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny maso ny maizina rehetra izay nanankinana ny raharahako hampihena azy amin'ny tsy fahombiazana dia hianjera ary ho faty amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mpandraharaha tsy mahomby izay te hampandiso ny ezaka ataoko amin'ny tsy fahombiazana tsy azo refesina dia avelao ny afon'ny Fanahy Masina handoro anao ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
Mivavaka aho mba ho ringan'ny afo ny lehilahy sy vehivavy matanjaka rehetra mijoro eo amin'ny lalan'ny fahombiazako satria fantatro fa ny afon'ny Tompo no handeha eo alohako ary handoro ny fahavaloko rehetra.
Ambarako amin'ny alàlan'ny hery amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka izao dia manomboka hiaina lafiny iray amin'ny orinasa mahomby amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amin'ny toerana rehetra tsy nahombiazako teo alohan'ny fitsapana, dia enga anie ny anjelin'ny fahombiazana ho tonga namako vaovao amin'ny anaran'i Jesosy.
Avereno jerena ireo Egyptiana hitanao anio fa tsy ho hitanao intsony izy ireo, amin'ny fiheverana mitovy amin'izany; Manome didy aho fa ny tsy fahombiazako hitako anio dia tsy hahita azy ireo intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny soratra masina: ambarao zavatra, dia hatao izy; Manambara ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Oh, ry anjely mitarika ny asa mahomby rehetra mankany amin'ny fahombiazana, mivavaka aho fa manomboka izao, dia tonga namako vaovao amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Ny soratra masina dia milaza fa ny devoly dia ratsy hatramin'ny voalohany, ary izany no nisehoan'ny Zanak'Andriamanitra handrava ny asan'ny fahavalo. Manameloka ny tsy fahombiazako amin'ny orinasa amin'ny fahavalo aho; Manome didy aho fa horavanareo ny asan'ny fahavalo noho ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
Manosotra ny orinasako amin'ny menaky ny fifaliana avy amin'ny ran'i Kristy sarobidy aho fa rehefa mahita ny raharahako ilay anjelin'ny tsy fahombiazana dia handalo amin'ny anaran'i Jesosy izy.
Tsy fahombiazan'ny orinasa
vavaka manohitra ny tsy fahombiazan'ny orinasa
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny famosaviana
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny sakana
Vavaka hanoherana ny ody sy i Jezebel
Andininy ao amin'ny Baiboly 20 momba ny ahiahy sy ny adin-tsaina
Salamo 100 Ny dikan'ny hoe Andininy